नेपाली युवाका लागि १० सुझाव - Solududhkunda Online
नेपाली युवाका लागि १० सुझाव
- 2021 December4मा प्रकाशित
१. ११/१२ पढ्दादेखि नै Computer चलाउन सिक्नुहोस्। कम्प्युटरमा पनि कमसेकम Word, Excel, Powerpoint, सामान्य डिजाइन, नेपाली टाइपजस्ता सीप सिक्नाले तपाईं अरुभन्दा एक तह अगाडि हुनुहुन्छ।
२. बिहानको कलेज छ भने Bachelors पढ्दादेखि नै आफ्नो अध्ययनसँग मिल्ने क्षेत्रमा Internship गर्नुहोस्। विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भएका अवसरहरुको खोजी गर्नुहोस्। स्मार्टफोन र इन्टरनेटको सुविधा छ भने तपाईं विश्वभरीको अवसर खोजी गर्न सक्नुहुन्छ।
३. तपाईंले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा फिडमा मिम, ट्रोल वा अवसर के आउँछ त्यो तपाईंमा भर पर्छ। त्यसैले ट्रोलका पेजभन्दा संघसंस्था, कम्पनी र जानकारीमूलक पेजहरु लाइक गर्ने बानी गर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईंले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा पनि अवसरहरूबारे जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुकदेखि टिकटकसम्म सबैमा यस्ता अवसरबारे जानकारी दिने अकाउन्टहरू छन्, विवेकशील भएर खोजी गर्नुहोस्।
४. फुर्सदमा हुँदा Online Courses हरू गर्नुहोस्। अहिले धेरै साइटहरूले निशुल्क अनलाईन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्।
५. राम्रो डिभिजन ल्याउन सकिँदैन भनेर धेरैले पूर्ण रुपमा अध्ययनलाई ध्यान दिने गरेका छन्। तपाईंले विशिष्ट श्रेणीमै मास्टर्स डिग्री पास गर्नुभयो तर कामको अनुभव छैन भने रोजगारीको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ। मास्टर्स गरेपछि इन्टर्नसिप गर्न न समयले दिन्छ न त जिम्मेवारीले नै। त्यसैले ब्याचलर्सदेखि नै इन्टर्नसिप गर्नुभयो भने बिस्तारै अनुभव बढ्दै जान्छ र मास्टर्स सक्दासम्म तपाईंमा अनुभव र योग्यता दुबै हुन्छ। जसले गर्दा प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुने धेरै सम्भावना रहन्छ।
७. तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि धेरै विश्यवविद्यालय र कुटनीतिक नियोगले छात्रावृति दिइरहेका हुन्छन्। राम्रो नम्बर ल्याएको र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव बटुलेको विद्यार्थीले सजिलै त्यस्तो छात्रावृति पाउँछन्। निशुल्क अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन गर्न पाइने त्यस्ता अवसरहरूको खोजी गरेर पहिलेदेखि नै आफूलाई तयार राख्दा तपाईंको सपना साकार हुने उच्च सम्भावना रहन्छ।
८. प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो करियरलाई सँगसँगै लानुहोस्। अध्ययनमा ध्यान दिनुहोस्। प्रेम र विवाहलाई मात्र केन्द्रमा राखेर नहेर्नुहोस्। आत्मनिर्भर भएपछि मात्र विवाहको बारेमा सोच्नुहोस्। जिन्दगी चलचित्र जस्तो हुँदैन। जहाँ चलचित्र सकिन्छ जिन्दगीको असली युद्ध त्यहिँबाट सुरु हुन्छ। सुखी र खुसी जीवनका लागि आर्थिक पाटो पनि बलियो हुनुपर्छ, मायाले मात्र जिन्दगी चल्दैन। दुबै पक्षलाई सन्तुलित बनाउनुहोस्।
९. कमाउँदै गर्दा रमाउन नबिर्सनुहोस्। आत्मनिर्भर भएर आफ्नै कमाइले सन्सारलाई नियाल्नुको मज्जा बेग्लै हुन्छ। विशेषगरी छोरीहरू आत्मनिर्भर भएर केही समय आफ्ना रहरहरू पुरा गर्न र संसार घुम्नका लागि छुट्यानुहोस्। विवाहपछि यस्त अवसर कम पाइन सकिन्छ। सन्सार फराकिलो छ र जिन्दगी अनिश्चित छ।
१०. कसैको सुझावमा चल्ने भन्दा पनि आफ्नो मनलाई सुन्नुहोस्। सपना देख्नुहोस् र त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोको नक्सा कोर्नुहोस्। कहाँ जाने भन्ने कुरा यकिन नभए सम्म कहाँ आइपुगेँ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। दयालू र असल बन्नुहोस्।